१०८ वर्षका भाग्यमानी बुवा, जस्ले आफ्नै छोराको चौरासी गरिदिए… – KhabarTime
के तपाईंलाई थाहा छ भगवान् शिवको रहस्य ?
०७८ असोज ०३ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारकाे भाग्यफल
इन्जिनियर हो भनेर झुक्याएर बिहे गरेर घर पुग्दा, जाँडखाने देखि बसको ड्राइभरसम्म परेपछि…
तपाइको यो साता कति शुभः? हेर्नुहोस् असोज ९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
शुक्रबार राती ९ बजेर ५३ मिनेटमा करिश्मालाई आएको ओलीको त्यो फोन
बर्दियाबाट आयो यस्तो दुःखद खबरः १० बजे राति एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु
पानीमा डुबेर एक बालिकाको मृत्यु
१०८ वर्षका भाग्यमानी बुवा, जस्ले आफ्नै छोराको चौरासी गरिदिए…
परासी, १४ कात्तिक । एक पिताले पुत्रको चौरासी पूजा गर्न पाउने सौभाग्य पाएका छन्। नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम०मा एक बुवाले छोराको चौरासी पूजा गरेका हुन्।
बाबुले छोराको चौरासी पूजा गरेको दृश्य विरलै देख्न पाइन्छ। सुनवल नगरपालिका–१२ हरकट्टाका १०८ वर्षीय केशवराज ज्ञवालीले आफ्ना जेठा छोरा दधिरामको आज चौरासी पूजा गराउँदै अरुलाई आशिष पनि दिए।
बाबुले छोराको चौरासी गरेको कहिल्यै नदेखिएको भन्दै स्थानीयवासीसमेत पिता ज्ञवालीसँग आशीर्वाद लिइरहेका थिए। चौरासी पूजामा बाबुछोराकै आशीर्वाद लिन पाउनु नौलो भएको स्थानीयवासी राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
१०८ वर्षीय वृद्ध केशवराज ज्ञवाली आफ्नो ८४ वर्षीय जेठा छोरा दधिरामको शुक्रबार चौरासी पूजा गराउँदै । तस्बिरः रासस
पिता ज्ञवाली अहिले पनि स्वस्थ्य छन् । खेतीपातीमै जीवन बिताएका बुबालाई अहिलेसम्म कुनै औषधि खुवाउनु नपरेको उनका साहिँला छोरा हरिप्रसादले बताए । केशवराजका चार छोरामा ८४ वर्षीय दधिरामसहित ८० वर्षीय ऋषिराम, ७७ वर्षीय हरिप्रसाद र ६३ वर्षीय डा। बाबुराम छन्।
छोराको चौरासी गर्न पाउँदा भाग्यमानी ठानेको बताउँदै केशवराजले आशीर्वाद लिन आउने सबैलाई स्वस्थ्य, सुखी र खान पुगोस् भनी आशीर्वाद दिएका थिए। आफूले यस्तो दृश्य पहिले नदेखेको तर आफ्ना बुवाले चौरासी पूजा गरिदिँदा निकै खुशी लागेको छोरा दधिरामले बताए।
विसं १९७० साउन १६ गते गुल्मीको बलेटक्सारमा जन्मिनका ज्ञवालीका चार छोरा अहिले पनि छन्। उनको अहिले पाँचौँ पुस्ता ९खनाति० चलिरहेको छ। उनका खनाति शिवम् दुई वर्ष पूरा भएका छन् जो २०७६ साउनमा जन्मेका हुन्। साहिँला छोरा हरिप्रसादका नाति शिवम् र वृद्ध केशवराजको उमेर ठीक १०० वर्षले फरक छ। रासस
नेकां नेत्री लिला नेपालले भनिन्ः यस्तै चाल हो भने अब कांग्रेसले देउवा राणा क्लब खोले हुन्छ (भिडियो)
हरियो रङ्गको कुकुरको बच्चा जन्मिएपछि...